IGreat Britain kuyinto sengqondo hhayi kuphela yayo yasekhaya, indlela umphakathi zokuphila, kodwa futhi nezidingo ekutholeni i-visa. Uma izimvume zokungena kunoma yiliphi izwe le-European Union ukuze uthole kalula, futhi akudingeki ukuba wenze okuningi umzamo nesikhathi, eNgilandi kukhona eziyinkimbinkimbi kakhulu kangakanani. Kukhona alanele kanye egcwele khona lwemibuzo ipasipoti liyadingeka ukuqoqa inqwaba izinkomba yomshado isimo, umsebenzi kanye engenayo. Kwezinye izimo, kudingeka izincwadi zokutusa ezivela esikoleni. Ngakho-ke, sizama ukubhekana nale nkinga kabanzi.
Okokuqala, kudingeka uzijwayeze yonke imisebenzi iphepha, uthole ukuthi yini lilandisa udinga ukunikeza Ihhovisi British ukuthola i-visa. Umnqopho ebaluleke kakhulu ukuvakasha kwakho kuleli zwe, English amakhono olimi kanye nokuntuleka izikweletu lempi noma ezidinga ikomiti yokwahlulela. Ekuqaleni, ungavakashela iwebhusayithi olusemthethweni Ihhovisi futhi uthole uhlu kwemibhalo edingekayo yokukhipha i-visa. Ezinye idatha yomuntu siqu kungenziwa sigcwaliswe ngqo kwi-inthanethi futhi uthole impendulo esicelweni sakho nge-imeyili yakho. emuva kwezinsolo Consular isicelo inikezwa usuku oludlulayo interview, phakathi kwesikhathi lapho uzocelwa imibuzo siqu, ukubuka imibuzo igcwaliswe. Bazophinde ukuhlola ezingeni lolwazi IsiZulu limi. Qiniseka ukunikeza isitatimende engenayo, ingxenye yomndeni.
Emva ukuhlangana yonke imininingwane ebalulekile, kufanele wazi konke mayelana British Ihhovisi. Njengazo zonke Amahhovisi e-England, jikelele embasi isebenza kuphela ngezinsuku zeviki, ngoMgqibelo nangeSonto izinsuku off. Iphinde ivaliwe amaholidi ebhange (Januwari 1-2, January 7-8, 8 Mashi, Maundy ngoLwesine, Good Friday, lePhasika, Meyi 9 Queen Lokuzalwa - Meyi 23, Usuku Russian Federation, National Unity Day 4 Novemba Christmas 25, 26 no-29 Disemba).
Ihhovisi British eMoscow ivuliwe Smolenskaya yashayisa unqenqema, 10, ikhodi yeposi - 121099. Imininingwane nompetha we umnyango eMoscow, sicela ushayele (495) 956-7200, ifeksi (495) 956-7201. zokuxhumana Imininingwane nge-Internet Kwenziwa kwi website esemthethweni. ihhovisi visa British itholakala Grand Savvinskaya Lane, 12. Ihhovisi British ivuliwe ngezinsuku zeviki, yokwamukela imibhalo Kwenziwa kusukela 9 ekuseni kuya ku-4 ntambama, ukulungele ukukhipha ama-visa kusuka amane ntambama kuya kweziyisithupha.
Ihhovisi British Petersburg ukuvula ukuze ngoMsombuluko kuya ngoLwesine kusukela 9 ekuseni kuya ku-5 ntambama. It ikhona indawo ubushiqela yesigaba sabasebenzi, 5, ikhodi yeposi - ifoni 193124. Imininingwane fax, okuyinto lungatholakala nanoma yimuphi umbuzo, kanje: 320-32-39, 320-32-11 (nekhodi yendawo 812). Izincwadi, imibuzo wathola nge-imeyili umfanekiso jikelele England eRussia. British Ihhovisi isebenza nge izicelo izakhamuzi Leningrad esifundeni, Pskov, Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Vologda futhi Veliky Novgorod, nezinye izakhamuzi ukubhekana enkabeni eMoscow. Usizo e visa kokuvula has visa isikhungo eBrithani, kusho uMnyango Itholakala Lake Lane, 7, ikhodi yeposi - (. Metro station "Ploshchad Rebellion") 191014. Akufanele sibakhohlwe ukuthi isicelo visa kungaba e Moscow, futhi uthole imibhalo ngomumo kufanele kuphela Petersburg. Ulwazi olunembile zingatholakala ku inombolo yocingo contact (495) 784-71-44 (ikholi icala ngalinye ruble 75 ngomzuzu), kanye kuwebhusayithi. Zonke imibhalo kufanele zibe ngokoqobo, kodwa kuyadingeka ukwenza okwengeziwe futhi amakhophi.
Rum Bacardi Black ( "Bacardi Black"): Izibuyekezo
Nezitsha Rimless: Izibuyekezo ikhasimende
Imisebenzi isimiso sezombangazwe sakhona kanye nendzima yayo emphakathini